အသက်ရှင်နေထိုင်လျှက်ရှိသော ငှက်အမျိုးကွဲပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများတွင် မျိုးကွဲအများဆုံးရှိသော တက်ထရာပေါ့ဒ်(tetrapod) အမျိုးအစားလည်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အာတိတ်မှ အန္တာတိတ်အထိ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (ecosystems) အမျိုးမျိုးတွင် ပျံနှံ့နေထိုင်ကြသည်။ ငှက် များ၏ အရွယ်အစားမှာ ၅ စင်တီမီတာ(၂ လက်မ)မျှသာရှိသော ဘီးဟမ်းမင်းငှက်(Bee Hummingbird) မှသည် ၂.ရ မီတာ(၉ ပေ) အထိရှည်သော ငှက်ကုလားအုပ်အထိရှိသည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်းများအရ ငှက်များသည် သယ်ယိုပေါ့ဒ် ဒိုင်နိုဆောများမှ ဂျူရက်ဆစ်အချိန်ကာလမှ စ၍ဆင်းသက်လာသည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး နှစ်ပေါင်း သန်း ၁၅၀ မှ သန်း၂၀၀ ခန့်တွင်ဖြစ်သည်။ နိခါတကဗေဒပညာရှင်အများစုက ငှက်တို့သည် Cretaceous–Tertiary မျိုးတုံးခြင်း အဖြစ်အပျက်အတွင် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဒိုင်နိုဆောတို့၏ တစ်ခုတည်းသော အဆက်အနွယ်များအဖြစ် ယူဆကြသည်။
ငှက်သည် အဘယ်ကြောင့် ပျံနိုင်သနည်း
ငှက်နှင့် တွားသွားသတ္တဝါတို့၏ ခြားနားချက်
ငှက်တို့သည် တွားသွားသတ္တဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာခါ စတွင် လိပ်နှင့် ဖွတ်တို့ကဲ့သို့ ဥကို မြေပြင်၌အု၍ သဲဖုံး၍ ဖြစ်စေ၊ သစ်ခေါင်းတွင်ထည့်၍ဖြစ်စေ ထားကြသည်ဟု အဆို ရှိသည်။ သို့သော် သွေးအေးသတ္တဝါမှ သွေးနွေးသတ္တဝါ အဖြစ် သို့ ပြောင်းလဲသောအခါ၌မူကား၊ သားကောင် ပေါက်ပွားစေရန် ဥကို အပူရှိန် တစ်သမတ်တည်းပေးဖို့ လိုလာသည်။ ထို့ကြောင့် ဥကို ဝပ်ပေးရန် အသိုက်လိုလာလေသည်။ ဦးစွာ၌ ငှက်တို့သည် အဆင်သင့်ရာမြေပေါ်၌ ဥအုကြသည်။ ဝပ်ကြသည်။ နောင်အခါ၌ ဥများမြေကြီးပေါ်တွင် လိမ့်မသွားစေရန် မြေကိုယက်ဖော်၍၎င်း၊ မြေချိုင်တွင်း၌ သစ်ခက်သစ်ရွက်ဖို့၍ ၎င်း အသိုက်လုပ်ပြီးမှ ဥအုတတ်ကြသည်။ တစ်ဖန်မြေကြီးသည် အပူအအေး အစိုအခြောက်ဟူ၍ ခဏခဏ ပြောင်းလဲတတ် သောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ကုန်းသတ္တဝါများက အန္တရာယ်ပေး တတ်ကြသောကြောင့် တကြောင်း မြေပြင်မှ မြင့်ရာအရပ်တို့တွင် ငှက်တို့အသိုက်ဖွဲ့လာကြပြန်သည်။ ဤသဘောအတိုင်း ငှက်သိုက်တို့၏ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြပုံကို ယနေ့ မြင်တွေ့ကြရသော အသိုက်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် သိအပ်သည်။ ဗျိုင်းနှင့် ခိုတို့သည် အသိုက်ကို တုတ်တံငယ်ဖြင့် ပြီးစ လွယ်လုပ်ကြသည်။ ကျီးနှင့် သိမ်းငှက်တို့သည် အသိုက်ထဲ၌ ဥကျင်းနက်နက်ကို အတွင်းသားနုနုတထပ်ခံ၍ တည်ကြ သည်။ အသိုက်လုပ်ပုံ အဆင့်အတန်း မြင့်သောငှက်မှာ စာဗူးတောင်းများဖြစ်သည်။ စာဗူးတောင်းသိုက်များမှ ဗူးတောင်းကို စောက်ထိုးထားဘိသကဲ့သို့ ရှိသည်။ မြက်ခြောက်၊ လျှော် စသည်တို့ဖြင့် သိုက်မြိုက်စွာ အသိုက်လုပ်တတ်သည်။အသိုက်လုပ်ရာ၌ ငှက်ဖိုသည် အသိုက်လုပ်ရန်သင့်သော အရပ်ကို ရွေးသည်။ ငှက်မသည် အသိုက်လုပ်ရန်နေရာ အတိအကျကို ရွေးသည်။ ထိုနောက် ငှက်ဖိုနှင့် ငှက်မတို့သည် အသိုက် လုပ်ရန် မြက်၊ သစ်ရွက်၊ သစ်ကိုင်း အမွှေးအတောင်၊ ကျူပင်၊ ကျူရိုး စသည်တို့ကို ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ လိုက်လံ၍ စုဆောင်းသည်။ ငှက်မအသိုက်ဖွဲ့သည့်အခါ ငှက်ဖိုသည်ရန်သူ မလာစေရန် ကာကွယ်ပေးရသည်။
"Morphological Clocks in Paleontology, andaMid-Cretaceous Origin of Crown Aves" (May 2014). Systematic Biology 63 (1): 442–449. Oxford Journals. doi:10.1093/sysbio/syt110. PMID 24449041.
Brands၊ Sheila (14 August 2008)။ Systema Naturae 2000 / Classification, Class Aves။ Project: The Taxonomicon။ 11 June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။